निन्द्रा लागेन ? सुत्ने कोठाबाट हटाउनुस् यी ५ सामान - Birgunj Sanjalनिन्द्रा लागेन ? सुत्ने कोठाबाट हटाउनुस् यी ५ सामान - Birgunj Sanjalनिन्द्रा लागेन ? सुत्ने कोठाबाट हटाउनुस् यी ५ सामान - Birgunj Sanjal
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २२:५९
दिनभरी थकान र कामको व्यस्तता पछि हरेक मानिसलाई पर्याप्त निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । तर गलेको शरीर लिएर ओच्छ्यानमा पुगेपनि कतिपय अवस्थामा राम्रोसं निन्द्रा पर्दैन । शारीरिक तथा मानसिक दुवै कारणले रातमा निन्द्रा पर्न ग्राहो हुन्छ ।
तर, यसका लागी वास्तुशास्त्रले भने केहि कारणलाई लाई दोषि मानेको छ । वास्तु अनुसार निन्द्रा नपर्नुको कारण मानिसका केहि गल्तीहरु हुन् । अर्थात हामीले सुत्ने ओच्छ्यान नजिकै राखिने केहि वस्तुहरुको कारणले हामीलाई निन्द्रा पर्दैन ।
२. पानीको जग/गिलास
सुत्ने ओच्छ्यान नजिकै कोठामा मोबाइल वा ल्यापटप राख्नु हुदैन । अन्यथा मानिसलाई राम्रो निन्द्रा पर्दैन । तसर्थ मोवाइल वा ल्यापटप सुत्नुअघि आफूभन्दा पर राख्नुर्पछ । वास्तु अनुसार मोबाइल र ल्यापटपले राहु दोष पैदा गर्ने र यसले मानिसमा नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ ।a